Ambongadiny ONE STEP HCV TEST (Ra manontolo / Serum / Plasma), mpamokatra sy mpamatsy fitaovana haingana HCV | Hẻo
Ny fomba ankapobeny hamaritana ny aretina miaraka amin'ny HCV dia ny fitandremana ny fisian'ny antibodies amin'ny virus amin'ny alàlan'ny fomba EIA arahin'ny fanamafisana amin'ny Western Blot. Ny fitsapana iray amin'ny dingana iray HCV dia fitsapana kalitao tsotra sy maso izay mamantatra ny viriosy ao amin'ny ra / serum / plasma iray manontolo. Ny fitsapana dia mifototra amin'ny immunochromatography ary afaka manome valiny ao anatin'ny 15 minitra.
The One dingana HCV Test dia Colloidal Gold nohatsaraina, haingana Immunochromatoraphic Assay ho an'ny fitiliana kalitao ny antibodies amin'ny Hepatitis C Virus (HCV) ao amin'ny Human Whole Blood / Serum / Plasma. Ity fitsapana ity dia andrana fitiliana ary ny zavatra tsara rehetra dia tsy maintsy hamafisina amin'ny alàlan'ny fitsapana hafa toy ny Western Blot. Ny fitsapana dia natao ho an'ny fampiasana Healthcare Professional ihany. Na ny fitsapana na ny valin'ny fitsapana dia natao hampiasain'ny matihanina ara-pitsaboana sy ara-dalàna ihany, raha tsy omena alalana amin'ny alàlan'ny lalàna mifehy ao amin'ny firenena fampiasana. Ny fitsapana dia tsy tokony hampiasaina raha tsy misy fanaraha-maso sahaza.
Toro lalana momba ny fomba fiasa
Ny fitsapana dia manomboka amin'ny santionany ampiharina amin'ny santionany tsara sy ny fanampiana ny omena omena diluent eo noho eo. HCV antigen-Colloidal Gold conjugate tafiditra ao anaty santionany dia misy fiatraikany amin'ny antibody HCV izay misy ao anaty serum na plasma, mamorona kompotan'ny antibody conjugate / HCV. Satria avela hifindra monina ny tsimok'aretin'ny fitsapana, dia lasa proteinina mifamatotra antibody iray izay mifindra ao amin'ny fonontselan-taratasy mamorona tarika miloko ao amin'ny faritry ny andrana ny fambolena antio / HCV. Ny santionany ratsy dia tsy mamokatra tsipika fitsapana noho ny tsy fisian'ny colloidal Gold conjugate / HCV antibody complex. Ny antigène ampiasaina amin'ny fitsapana dia proteinina recombinant mifandraika amin'ny faritra tena tsy azo ialana amin'ny HCV. Ny tarika fanaraha-maso miloko ao amin'ny faritra fanaraha-maso dia miseho amin'ny faran'ny fizahana fitsapana na inona na inona valin'ny fitsapana. Ity tarika fanaraha-maso ity dia vokatry ny fatorana kôlôjika Colloidal Gold amin'ny antikôniô anti-HCV mihetsika amin'ny fonosana. Ny tsipika fanaraha-maso dia manondro fa ny conjugate Gold Colloidal dia miasa. Ny tsy fisian'ny tarika fanaraha-maso dia manondro fa tsy mety ny fitsapana.
REAGENTS SY NY FITAOVANA VITA
Fitaovana fanandramana isam-pokontany vita amin'ny desiccant
• Tavoahangy plastika.
• Ohatra malemy
• fonosana Atsofohy
Fanaraha-maso tsara sy ratsy (misy amin'ny singa misaraka)
FITONDRANA & FAHATONDRANA
Ny kitapom-panadinana dia tsy maintsy tehirizina amin'ny 2-30 ℃ ao anaty paosy voaisy tombo-kase ary ao anaty fepetra maina.
FAMPITANDREMANA SY FITORIANA
1) Ny valiny tsara rehetra dia tsy maintsy hamafisina amin'ny fomba hafa.
2) Raiso ho toy ny aretina ny aretina. Manaova fonon-tànana sy akanjo miaro rehefa mikarakara santionany.
3) Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fitsapana dia tokony autoclaved alohan'ny fanariana.
4) Aza mampiasa fitaovana kit mihoatra ny daty lany daty.
5) Aza mifanakalo reagents amin'ny maro samihafa.
SAMPLE fanangonana sy fitehirizana
1) Angony ireo santionany amin'ny Rà / Serum / Plasma iray manontolo manaraka ny fomba fanao amin'ny laboratoara mahazatra.
2) fitehirizana: Ny rà manontolo dia tsy azo vonoina. Ny santionany dia tokony hampangatsiaka raha tsy ampiasaina amin'ny andro fanangonana azy. Ny specimens dia tokony hivaingana raha tsy ampiasaina ao anatin'ny 3 andro fanangonana. Aza afangaro amin'ny hatsiaka sy fanalefahana ny santionany mihoatra ny in-2-3 alohan'ny hampiasana azy. 0,1% -n'ny Sodium Azide dia azo ampiana amin'ny specimen ho toy ny preservative nefa tsy misy fiatraikany amin'ny valin'ny assay.
1) Ampiasao ilay tsiranoka plastika mihidy ho an'ny santionany, alaivo ny 1 indray mitete (10μl) amin'ny Rà Revo / Serum / Plasma mankany amin'ny santionany boribory amin'ny karatra fanandramana
2) Ampio 2 latsaka ny santionany Diluent amin'ny santionany tsara, avy hatrany aorian'ny nampidirina ilay santionany, avy amin'ny tendron-tsiranoka mitete tavoahangy (na ny atiny rehetra avy amina ampule fanandramana tokana).
3) Adikao amin'ny 15 minitra ny valin'ny fitsapana.
1) Ny fangatahana habetsahan'ny diluent santionany dia ilaina amin'ny valin'ny fitsapana marina. Raha tsy hita eo amin'ny varavarankely andrana aorian'ny iray minitra ny fifindra-monina (ny fanamainana ny membrane) aorian'ny iray minitra dia ampio ranon-tsiranoka iray hafa mihintsana ao amin'ilay santionany.
2) Ny valiny tsara dia mety hiseho raha vantany vao iray minitra ho an'ny santionany misy antibodies HCV avo lenta.
3) Aza adika ny valiny aorian'ny 20 minitra
Famakiana ny valin'ny fitsapana
1) tsara: Samy misy tariby fanandramana mena manjavozavo sy tarika mena mifehy purplish mipoitra eo amin'ny membrane. Arakaraka ny maha ambany ny fatran'ny antibody no mamparefo ny tarika fitsapana.
2) ratsy: Ny tariby fanaraha-maso mena tsy misy fangarony ihany no hita eo amin'ny membrane. Ny tsy fisian'ny tarika fitsapana dia maneho vokatra ratsy.
3) Valiny tsy mety: Tokony hisy fikajiana mena mena hatrany amin'ny faritra fanaraha-maso, na inona na inona valin'ny fitsapana. Raha tsy hita ny tarika fanaraha-maso dia heverina ho tsy mety ny fitsapana. Avereno ny fitsapana amin'ny alàlan'ny fitaovana fitsapana vaovao.
Fanamarihana: ara-dalàna ny manana tarika fanaraha-maso somary maivana miaraka amina santionany tsara dia tsara, raha toa ka hita miharihary.
1) Ra, Serum / Plasma manontolo mikoriana madio, vaovao, maimaimpoana ihany no azo ampiasaina amin'ity fitsapana ity.
2) Ny santionany vaovao dia tsara indrindra fa ny santionany mivaingana dia azo ampiasaina. Raha efa natsangana ny santionany dia tokony avela hilona amin'ny toerana mijidina izy ary manamarina raha misy tsiranoka. Rà iray manontolo dia tsy azo vonoina.
3) Aza taitra ny santionany. Ampidiro ny pipette eo ambanin'ny tampon'ny santionany fotsiny mba hanangonana ilay Sampana.
Previous: Kasety / Strip / kit (WB / S / P) HCV fitsapana haingana
Manaraka: COVID-19 Influenza A + B Antigen Combo Rapide Test Cassette